Japan Training Visa ?!!!!!!
ညီမ​သူငယ်ချင်း​က​အထည်​ချုပ်​နဲ့​ဂျပန်​ကို သွား​မှာ​ပါ မှန်းခြေ​၅​၀​လောက်​ကုန်​မယ်​လို့ အေး​ဂျင့်​က ပြော​ပါ​တယ်။ ကျောင်း​နဲ့​သွား​ဖို့​မတတ်​နိုင်​တဲ့​သူ​တွေ​အနေ​နဲ့wpသွား တာ​က​ရော​အဆင်​မ​ပြေ​နိုင်​ဘူး​လား​သိ​ချင်​ပါ​တယ် ရှင့်။ သူ​တို့​ဂျပန်​က​ကိုယ်တိုင်​လာ​ရွေး​တာ​ပါ။လ​စာ​ကတော့​အို​ဗာ​တိုင်​မ​ပါ ၁​၂​သိန်း​လောက်​ပဲ​၇​မှာ​ပါ။ ပိုက်ဆံ က​ရော​ပို​နိုင်​ပါ့​မ​လား။ ကူညီ​ပါ​အုန်း​ရှင့်။
phyo asked Apr 8, 2015
+နဲ့​ပြော​ရ​ရင် အလုပ် နေ​စရာ အဆင်သင့် ရ​တယ်
-နဲ့​ပြော​ရ​ရင်​လုပ်​ပေး​ရ​တဲ့​အချိုန် နဲ့​ရ​ငွေ​မ​ညီ​ဘူး မြန်မာ​ပြည်​က​ထွက်​စ​မှာ မြန်မာ​ဝင်ငွေ​နဲ့ တွေ​ပြီး များ​တယ်​ထင်​တာ ဒီ​မှာ​နေ​တာ ရက်​အနဲ​ငယ်​အတွင်း​သိ​လာ​တဲ့​အခါ တခြား​မှာ​ပို​လုပ်​ချင်​လာ​တယ် ဘာ​လို.လဲဆို​တော့ သူ​တို.ပေး​ငွေ​က တခြား​အလုပ်​လုပ်​ရင် ၂ ရက်​နဲ့​ရ​မဲ့​ငွေ။ လုပ်​ပေး​ရ​တာ​တ​လ​စာ ။
ကျွှန်​မကို ခေါ်​ပေး​ဘို.ပြော​ပါ​တယ် စည်းကမ်း​တွေ​ကြည်.လိုက်​တော့ တ​လ​ခိုင်း​ပြီး ၂​ရက်​စာ​ပေး​လို. မြန်မာ​တွေ​အပေါ် နိှမ်​လှ​ချီ​လား​လို. ဆို​ပြီး​လုပ်​မ​စား​ဖြစ်​ပါ​ဘူး။
ဂျပန်​မှာ ၁​နာရီ​အလုပ် အနဲ​ဆုံး ၇​၅​ဝရမ်း ရ​တယ် ရ​မဲ့​လ​စာ​နဲ့ လုပ်​ပေး​ရ​ချိုန် ညီ​မှာ​လား။အရေးကြီး ပွိုင့်​ဘဲ
phyo answered Apr 8, 2015
ကျန်းမာ​ရေး​အာမခံ​ရှိ​ပါ​သလား။လုပ်​ပေး​မှာ​လား။စကားပြန်​ရှိ​လား။ဘယ်​ဒေသ​မှာ​လဲ။တ​ခု⁠ခု​အဆင်​မ​ပြေ​ရင်​တာဝန်​ယူ​ဖြေ​ရှင်း​ပေး​မယ့်​လူ​ရှိ​လား။ ဂျပန် ဟာ​ထိုင်း၊မ​လေး​နဲ့​မ​တူ​ပဲ​တရား​ဥပဒေ​စိုး​မိုး​မှူ​ရှိ​ပါ​တယ်၊နားလည်​တယ်​ဆို​ရင်​ပေါ့။
→ ကား​စ​လစ်​ဈေ​နဲ့ ကား​ဈေး​တွေ ဆက်လက်​ကျ​ဆင်း​နေ
В· I haveathree year old and had an accident on my couch and it smells like pee now, I don't know how to get rid ofthesmell. She went…
Нello, I think yоur site mіght be havіng browser compatibility issues. Ꮤhen I loߋk at your blog in Chrome, it looкs fine but ԝhen opening in Internet Explorer, it haѕ…
Snow in Japan by Ar Kar Haine
ကို​ရီး​ယား​ဒ​ရာ​မာ​ဇာတ်​လမ်း​တွဲ​ဆု သိမ်းကျုံး​ဆွတ်​ခူး​သွား​တဲ့ You Who Came From The Star
Apple ရဲ့ ကမ်းလှမ်း​မှု​ကို ပယ်​ချခဲ့​သော ( ၁​၉ ) နှစ်​ကျောင်းသား
Motorolla ရဲ့ဟန်းဆက် ထုတ်ကုန်အသစ် New Moto X